သတ္တမအကြိမ်မြောက် ဒါဇင်ပလပ်ရဲ့အလှူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » သတ္တမအကြိမ်မြောက် ဒါဇင်ပလပ်ရဲ့အလှူ
Posted by Nyein Nyein on Feb 7, 2013 in Education, Environment, Society & Lifestyle | 18 comments
Dozen+ ၏လှုပ်ရှားမှုများ DozenPlus သတ္တမအကြိမ်
ဒါဇင်ပလပ် အဖွဲ့သားများရဲ့ သတ္တမအကြိမ်မြောက် အလှူကို ၃.၂.၂၀၁၃ နေ့မှာ အောင်မြင်စွာ လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် သွားလှူခဲ့တဲ့ကျောင်းကတော့ (၅)ရပ်ကွက်၊ (၇/၈)လမ်းဆုံအနီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်ထဲက တိက္ခာရာမ သီလရှင်စာသင်တိုက်နှင့် သီလရှင်သင်ပညာရေးကျောင်းတစ်ကျောင်းပါ။ မိဘမဲ့ကလေးတွေနဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ကလေးတွေကို အခမဲ့ပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ကျောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းကို အဓိကအုပ်ချုပ်နေတာကတော့ ဆရာလေးဒေါ်တိက္ခဉာဏီနဲ့ ဆရာလေးဒေါ်ကုသလဉာဏီ တို့နှစ်ပါးပါ။ ဒါဇင်ပလပ်အဖွဲ့သားတွေ သွားလှူတဲ့အချိန်မှာတော့ အုပ်ချုပ်တဲ့ ဆရာလေးနှစ်ပါးလုံးက ခရီးထွက်နေလို့ မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ ဒါနဲ့ ကျောင်းမှာရှိနေတဲ့ ဆရာလေးတွေကိုပဲ စားစရာ၊ စာရေးကိရိယာပစ္စည်းတွေနဲ့ အလှူငွေ(၁၆၂၅၀၀)ကို လှူဒါန်းခဲ့ပြီး သိချင်တာလေးတွေကို တစ်ယောက်တစ်ပေါက် အင်တာဗျူးခဲ့ရပါတယ်။ ဟိုလူမေး၊ ဒီလူမေးတာတွေကို ဖြေပေးရတာနဲ့ ဆရာလေးတွေလည်း တော်တော့ကို အလုပ်ရှုပ်သွားပါတယ်။
၁။ လေးပေါက်ရဲ့ဒါန SEIKO နာရီ၊ ကရဲစည်လှူတဲ့ ခေါက်ဆွဲသုပ် ပွဲတစ်ရာ၊ ဒါဇင်ပလပ်အဖွဲ့သားများရဲ့ ပညာဒါန စာရေးကိရိယာများနဲ့ အလှူငွေ
ဆရာလေးတွေရဲ့ ပြောကြားချက်အရတော့ ဒီကျောင်းလေးကို (၂၀၁၀)ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ အခုထိတော့ မူလတန်းအဆင့်ထိပဲ ကျောင်းမှာစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရှိပါသေးတယ်။ အလယ်တန်းနဲ့ အထက်တန်းတွေကတော့ တွဲဖက်ကျောင်းဖြစ်တဲ့ ဇဗ္ဗူဥသျှောင်ကျောင်းမှာ သွားရောက်ဖြေဆိုရပါတယ်တဲ့။ မူလတန်းကနေ အထက်တန်းအထိကို ကျောင်းသားပေါင်း (၂၅၀)လောက်ရှိပါတယ်။ စာသင်ကြားပေးတဲ့ ဆရာ၊ဆရာမတွေကတော့ အားလုံးပေါင်း(၂၁)ယောက်ပါ။ အဲဒီ့ထဲမှာမှ တစ်ယောက်ကို တစ်လ(၄၀၀၀၀)နှုန်းနဲ့ လစာပေးရတဲ့ ဆရာ၊ဆရာမကတော့ (၁၁)ရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့ဆရာ၊ဆရာမတွေကတော့ သူ့ဘာသာရပ်အလိုက် အချိန်ပိုင်းလာပြီး ပညာဒါန သင်ကြားပေးတာပါ။ study guide လာလုပ်ပေးနေတဲ့ လူငယ်လေးတွေကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
၂။ ပို့စ်အမျိုးအမျိုးနှင့် ချစ်စဖွယ်ကလေးများ……………..
နောက်ထပ်တွေ့ခဲ့ရတာကတော့ ကျောင်းမှာရှိနေတဲ့ မိဘမဲ့ကလေးတွေပါပဲ။စုစုပေါင်း အယောက်(၈၀) ရှိတယ်လို့ပြောပေမယ့် အားလုံးကိုတော့ မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ သိချင်တာတွေကို ဆရာလေးတွေက ပြောပြပြီးတော့ စာသင်ကျောင်းဆောင်ကို လိုက်ပြခဲ့ပါတယ်။ ယခု လက်ရှိကျောင်းဆောင်ကတော့ စာသင်ကြားလို့ သိပ်အဆင်မပြေလောက်ပါဘူး။ အတန်းတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြားမှာ ထရံတစ်ဝက်လောက်ပဲ ကာထားတာပါ။ စာသင်ချိန်ကလည်း နေ့လည် (၁၂)နာရီကနေ ညနေ(၅)နာရီအထိကို တစ်ချိန်တည်းသင်တာဆိုတော့ အခုလက်ရှိ စာသင်ဆောင်အခြေအနေနဲ့ဆိုရင် ဆရာ၊ဆရာမတွေ အားစိုက်ပြီး သင်ကြားရမယ့်ပုံစံပါ။
၃။ လက်ရှိ အသုံးပြုနေသော စာသင်ဆောင်ရှိ စာသင်ခန်းများ……………..
၄။ အကာမကောင်းပေမယ့်လည်း အလင်းရောင်တော့ ကောင်းကောင်းရပါတယ်…………
ဆောက်လက်စကျောင်းဆောင်ကြီးကိုတော့ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အလှူရှင်တွေလာရောက်လှူဒါန်းသလောက်နဲ့ပဲ အဆောက်အဦးကို စထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးစီးဖို့ကတော့ လိုပါသေးတယ်။ အခုထိတော့ လှူဒါန်းမယ့် အလှူရှင်တွေကို လိုအပ်နေပါသေးတယ်။
၅။ ဆောက်လက်စ ကျောင်းဆောင်အတွက် လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်………………
လှူစရာရှိတာတွေကိုလှူ၊ သိချင်တာတွေကို မေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အားလုံးပဲ အသီးသီးအိမ်ပြန်တဲ့လူကပြန်၊ သွားစရာရှိတဲ့လူသွားနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါဇင်ပလပ်ရဲ့ ပညာရေးအလှူတစ်ခု အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ၀မ်းသာပီတိတွေကတော့ အဖွဲ့သားတိုင်းရဲ့ ရင်ထဲမှာ အပြည့်ဖြစ်နေမှာပါ။
ဒါဇင်ပလပ်ရဲ့သတ္တအကြိမ်မြောက်အလှူအတွက် ပို့စ်ကို နောက်ကျမှ တင်ရတဲ့အတွက် အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်။ အခုတလော အလုပ်တွေရှုပ်နေတာနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကို လုံးဝမရောက်ဖြစ်လို့ပါ။ အားလုံးပဲ အေးချမ်းပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ…………………………………….
ပို့စ်မျှော်နေတာ ညိမ်းညိမ်းရေ။ မအားတဲ့ကြားက အချိန်မှီတင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ဒါဇင်ပလပ်စ်အဖွဲ့သားများအားလုံး လဲ ၇ ကြိမ်မြောက်အလှူမှသည် နောင်လပေါင်းများစွာ
နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်လက်အကျိုးဆောင်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပါတယ်။
နောက်တလ ..ဟို ဖုတ်သွင်းစာရေးဆြာ ကိုရေးခိုင်းပါလားအေ…
ငြိမ်းရေ အခုလို မအားမလပ်ကြားက ပိုစ့်လေးကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် တင်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးကျေးပါနော် …
ဒါဇင်ပလပ်စ်ရဲ့ အလှူအတွက်လည်း 0မ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ် … နောက်လ နောက်လများမှာလည်း
အခုလိုပဲ လှူဒါန်းနိုင်ပါစေလို့ …………………..
ညိမ်းလေးရေ… ခဏခဏဖုံးဆက်နှောက်ယှက်မိလို့ ဆောဒီးပါနော်…
သတ္တမအကြိမ်မြောက် ဒါဇင်ပလပ်ရဲ့အလှူကို သာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်ရင်းးး နောက်……………….. အလှူရှင်များကိုလဲ
စေတနာသဒ္ဒါတရားထက်သန်စွာဖြင့် လစဉ်ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။
တစ်လတစ်လနဲ့ ခုနှစ်လတောင် ပြီးမြောက်ခဲ့ပြီးနော်။
ဒီတစ်ခေါက်အလှူလည်း မော်လမြိုင်ရောက်နေလို့ မလိုက်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်
ငြိမ်းငြိမ်းရဲ့ အလှူပို့လေးကို ဖတ်ပြီး သာဓုခေါ်သွားပါတယ်နော်
ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့မနက်ပဲ (၇)ကြိမ်မြောက်အတွက် ညီမလေးငြိမ်းငြိမ်းပိုစ့်ကိုစောင့်ရင်း…
အလှူရှင်များရဲ့ လက်ကျန်ငွေစာရင်းကို တွက်ကြပါတယ်…
နောက်ရက်များမှာ ထပ်ပြီးတော့ လက်ကျန်ငွေကုန်ခါနီး အလှူရှင်များကို အကြောင်းကြာပါဦးမယ်…
ထပ်မံပါဝင်လာသော အလှူရှင်များကိုလဲ ဒီနေရာကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
ကျွန်တော်တို့ ဒါဇင်ပလပ်နဲ့အတူ ပူပေါင်းပါဝင်ကြသူများအားလုံးရဲ့စေတနာတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ထပ်မံကြိုးစားပါဦးမယ်လို့ ကတိပြုရင်း…
ဒါဇင်ပလပ်အဖွဲ့သူ၊ အဖွဲ့သားများအားလုံးက အမျှပေးဝေလိုက်ပါတယ်…
အမျှ… အမျှ… အမျှ…
ဒီလကျောင်းလေးမှာ လေးပေါက်ဆုရထားတဲ့ နာရီလေးကိုလှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်…
သူတို့အတွက် အကျိုးပြုမယ့်အချိန်လေးတွေအတွက်… သာဓုခေါ်ပါလေးပေါက်ရေ…
ဒါဇင်ပလပ် အဖွဲ့ရဲ့ ပထမ အကြိမ်ကနေ အခု သတ္တမအကြိမ်ကနေ နောက် အကြိမ်ပေါင်း ထောင်သောင်း ချီ လှူဒါန်းနိုင်ဘို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်
ပါဝင်တဲ့ လူအားလုံးကို သာဓုလဲ ခေါ် လုပ်ဆောင်ချက်တွေအတွက် ချီးကျူးမိရင်း အားကျစိတ်လဲ ဖြစ်ပေါ် မိပါတယ်
သွားလှူရင်းနဲ့ ဘုန်းဘုန်း တို့ ဆရာလေး တို့ ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကို အားကျရင်း ဘုန်းကြီးဝတ် မယ်သီလရှင် ၀တ်ဖြစ်ကုန်ကြမှာကိုပါ ၊ တခြားလူတွေတော့ ခဏ နေကြပါဦး တကယ်လို့ ကိုဖက်ကက်ကြီး ၀တ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီး ဥပဓိရုပ်မို့ ဇနီးချော နဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေက ခွင့်ပြုသင့်ပါတယ်လို့
ဒီထက်မက အများကြီး လှူနိုင်သည်အထိ စီးပွားတိုးတက်ပါစေ
ငြိမ်းငြိမ်းရေ… သာဓု..သာဓု..သာဓုပါနော်… စေတနာအရင်းခံနဲ့ လစဉ်မပြတ်လှူလာတာ ခုနစ်ကြိမ်တောင်ရှိနေပြီ… တကယ်ကို သာဓုခေါ်ပါတယ်နော်… ဆထက်ထမ်းပိုး လှူဒါန်းနိုင်ကြပါစေလို့…
အော် ခုနှစ်ကြိမ်တောင် ရှိပြီပဲ ရာချီ ထောင်ချီ သောင်းချီဆက်လက်တည်တံ့ပါစေလို့
ဒီနေရာလေးမှာ ကျွန်တော်ဂဇက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ထူးထူးခြားခြားအလှူရှင် (၃)ယောက်ရဲ့ဒါနတစ်ခုအကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်…
ဂဇက်ရဲ့စာပေဆုပေးပွဲနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရ နာရီ (၃)လုံးကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်…
သူတို့ (၃)ယောက်က ဒါဇင်ပလပ်ရဲ့အလှူတွေမှာ သူတို့ဆုရထားတဲ့ အမှတ်တရ နာရီလေးတွေလှူချင်တယ်လို့ ဆိုလာတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့လက်ခံရယူသိမ်းဆည်းထားပြီးတော့ လှူဒါန်းဖို့စီစဉ်ပေးပါတယ်…
တကယ်လို့ ကျောင်းသား (၁၀၀) အောက်ပဲရှိတဲ့ ကျောင်းသေးသေးလေးတွေမှာ
နာရီအသေးဖြစ်တဲ့ လေးပေါက်နဲ့ ကိုပေတို့ရဲ့ နာရီတွေကို လှူဒါန်းပေးဖို့နဲ့
ကျောင်းသား (၁၀၀)နဲ့အထက်ရှိတဲ့ ကျောင်းအကြီးတွေကျတော့ ဦးကျောက်ရဲ့ နာရီအကြီးကို လှူဒါန်းပေးဖို့ပါပဲ…
ကျွန်တော်တို့က တစ်လကို တစ်ကျောင်းသွားနေတာမို့ တစ်ကျောင်းထဲ နာရီ(၃)လုံးလုံးလှူလိုက်ဖို့ကျတော့ မလိုအပ်ဘဲ လှူဒါန်းသူတွေရဲ့စေတနာအပေါ် ပြီးပြီးရောလုပ်သလိုမဖြစ်စေချင်လို့ သေချာစီစဉ်လိုက်ပါတယ်…
ဒီလမှာတော့ လေးပေါက်ရဲ့နာရီလေးကို လှူဒါန်းလိုက်ပါတယ်…
နောက်တစ်လမှာတော့ သွားရောက်လှူဒါန်းမယ့်ကျောင်းအခြေအနေကို ကြည့်ပြီး ကိုပေ့နာရီလေးဖြစ်မလား… ဦးကျောက်နာရီလေးဖြစ်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့် သာဓုခေါ်ပေးပါလို့…
မျှော်ရအောင် လုပ်မိတဲ့အတွက် အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်………… အမှန်ဆို စောစောတင်ပေးသင့်တာပါ…………. ဒီတစ်ပတ်မှပဲ အလုပ်က ဘယ်လိုမှမအားလို့ပါ……………. ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ သာဓုခေါ်ပေးကြလို့ အလှူအကျိုးကို အားလုံး ထပ်တူထပ်မျှ ရနိုင်ကြပါစေ….. ရလည်း ရမှာပါ……….
ဒါဇင်ပလပ်လည်း ရှေ့ဆက်ပြီး ဒီ့ထက်မက ပညာပါရမီဖြည့်နိုင်ပါစေ……….. လို့ဆုတောင်းပါတယ်……………
ငြိမ်းလေးကိုပဲ ဦးကြောင် မျှော်နေမိတော့တယ်ကွယ်…။
သာဓု သာဓု သာဓု ပါရှင့်။ အရမ်းကြည်နုးရပါတယ်။ နောက်လအတွက် အလှူငွေကိုထုံးစံအတိုင်း ရွှေအိနဲ့ဆက်သွယ်ခိုင်းလိုက်ပါ့မယ်။ ဒါဇင်ပလပ် ခရီးလမ်းခြေလှမ်းမှန်မှန်နဲ့ ထာဝရဖြောင့်တန်းပါစေ။